Kwakukhona isikhathi lapho wena nomyeni wakho noma umngane umfana nje ayengeke azigcine izandla off nomunye, kodwa manje izinto sezishintshile futhi neze uzizwe njengo uthando. Ingabe lokhu ongafana isimo wena njengamanje? Ukuqinisekisa ukuthi une fun okuningi ngangokunokwenzeka esetshenziswa ukuba nomlingani wakho ekuqaleni, funda indlela uthole isimo for love.
Yenza ephelele ambiance
Imibhangqwana eminingi ngesikhathi ekuqaleni ubuhlobo babo nje kudingeka ekhoneni yangasese ukuze hit the perfect love ukwenziwa kwemizwa. Nokho, njengoba ubuhlobo ikhula, iqala ukulahlekelwa charm kanye esetshenziswa ifa. Ukuba ambiance ilungelo kungasiza labo bantu ukuba singene mood for love kalula.
Ungazama by dimming izibani of ekamelweni lakho nokubeka abanye umculo romantic on. Qiniseka umbhede wakho awukona eziminyene; Abantu abaningi ngeke nje angazizwa romantic endaweni zingcolile. Ungavumeli ekamelweni lakho ukuba hot too noma kubanda njengoba bobabili kungaba turnoffs osheshayo. Uma une air conditioning system noma bafudumale efakwe, silungise. Ukuvula noma ukuvala amafasitela kungakusiza in normalizing lokushisa ekamelweni lakho bese wenze indawo ekahle ekutholeni ethokomele.
Stress ingenye yezimbangela ezivame kakhulu encishisiwe sex drive. Izibalo Muva etholwe zembula ukuthi azungeze 15% amadoda libido low ngokuyinhloko ngenxa yokucindezeleka abanakho ekuphileni. Testosterone yiyona hormone elawula sex drive in amadoda. Njengoba umuntu ekhula (30 noma ngaphezulu), testosterone yakhe level uqala yehla; ukucindezeleka ezingakwenza uqaleke ukukhiqizwa cortisol kanye testosterone yakhe level kunciphisa nakakhulu. Ngakho, umuntu ukhathazwa ukucindezeleka ngokuvamile has libido ngaphansana amanye amadoda of age yakhe.
Uma ufuna ukuletha emuva inhlansi futhi ufuna uthole isimo ngothando njengoba angesabi njengoba you sebenzisa ukwenza iminyaka embalwa emuva, kuzodingeka ukuba uthole izindlela ukubulala ukucindezeleka umlingani wakho nazo ngesikhathi esifanayo get wena uyeke wagcizelela. Okungcono, kufanele basizane in reinstating umuzwa wobunye by eshaya ukucindezeleka. Inike a massage bese ethi akabuyele umusa, thatha shower hot ndawonye, sipheka ndawonye, ukuhamba ensimini emva kwesidlo; zonke lezi kuyosiza wena nomlingani wakho sokuphumula futhi uthole ephelele love ukwenziwa kwemizwa.
Qiniseka ukuthi uzizwa sexy
Ukuze sizizwe like uthando, wena kumelwe siqale sizizwe sexy. Uma ungeyena beqiniseka ngendlela obukeka ngenxa isisindo okuzuzile eminyakeni embalwa edlule, zama hit the gym futhi ulahlekelwe ezinye it. Lokhu kuyokwenza beqiniseka kakhudlwana kuwe futhi zizophinde uqala ukuzizwa sexy. Ungazama out lingerie entsha, kodwa qiniseka ukuthi ukhululekile kukho; lokhu kungenxa yokuthi induduzo kuqakathekile kakhulu ukuzizwa sexy.
Ukuze uthole isimo for love, kumelwe wenze izinto uzoqeda okucasula kusuka ubuhlobo bakho. Uma ubuhlobo bakho iba okuthakazelisayo, ngeke ukuthole kunzima ukungena sengqondo esifanele ukuze enze uthando.
Falling in love ingenye imizwa imilingo kakhulu emhlabeni. egcwele…